के तपाइले अनन्त जीवन पाउनु भएको छ?
बाइबलले अनन्त जीवन को बारेमा स्पष्ट बाटो देखाउँद छ। पहिले, हामीले यो जान्न जरूरी छ कि हामीले परमेश्वरको विरूद्ध पाप गरेका छौँ: "किनकी सबैले पाप गरे का छन्, र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्" (रोमी ३:२३)। हामी सबैले परमेश्वरलाई मन नपर्न गरेका छौँ, जसले हामीलाई दण्डको भागीदार बनाउँदछ। किनकी हामी सबैले अन्नत परमेश्वरको विरद्धमा असिमित पाप गरेका छौँ, जसको लागी केवल अनन्तकालको दण्ड पर्याप्त छ। ‍"किनकी पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अन्नत जीवन हो" (रोमी ३:२३)।
यसकारण, येशू ख्रीष्टले, कुनै पाप गर्नुभएन (१ पत्रुस २:२२), अनन्तकालको परमेश्वरको पुत्र मानिस बन्नुभयो (१ यूहन्ना १:१,१४)। अनी हाम्रो पापको ज्याला तिर्न मर्नुभयो। “तर परमेश्वरले उहाँको प्रेम यसरी देखाउनु, कि हामी पापै छदैँ ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो” (रोमी ५:८)। येशू ख्रीष्ट क्रूसमा मर्नुभयो (यूहन्ना १९:३१-४२), पाप उठाउनु भयो जसको भागीदार हामी थियौँ (२ कोरिन्थी ५:२१)। तीन दिन पछी उहाँ मृत्युबाट बौरी उठनुभयो (१ कुरिन्थियो १५:१-४), पाप र मृत्यु माथी विजय प्राप्त गर्नु भयो। “परमेश्वर र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता धन्यका हनुहुन्छ! उहाँको माहान् कृपाले मृतकबाट येशू ख्रीष्टको पुनरूत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ (१ पत्रुस १:३)।
विश्वासद्वारा, हामीले आफनु मनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ – उहाँ को हुनुहुन्छ, उद्धारको लागी उहाँले के गर्नुभयो र किन् (प्रेरित ३:१९)। यदि हामी उहाँमाथी आफ्नो विश्वास रख्दछौँ, उहाँले क्रूसमा हाम्रो पापको दाम चुकाई दिनुभयो, उहाँको मृत्युमा मात्र भरोसा गेरर हाम्रो पाप क्षमा हुनेछ र स्वर्गमा अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा पाउँन सक्छौ। "किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोई पनी नाश न होस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्" (यूहन्ना ३:१६)। “किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गरयौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भनी आफ्नो हृदयमा विश्वास गरयौ भने तिम्रो उद्धार हनुछ” (रोमी १०:९)। क्रूसमा येशूले पुरा गर्नुभएको काममाथिको विश्वास नै केवल अनन्त जीवनको साँचो बाटो हो। "किनभुने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहारूले उद्धार पाएका छौँ – र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो -कर्महरूद्वारा होइन नत्रता मानिसले घमण्ड गर्नेछ” (एफिसी २:८-९)।
यदि तपाईंले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्न र परमेश्वरबाट आफ्नो पापको क्षमा चाहनुहुन्छ भने, यो सरल प्रार्थना तपाईंले गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रार्थना गर्नाले वा अरू कुनै प्रार्थनाले तपाईंलाई बचाउन सक्दैन। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर मात्र तपाईंलाई तपाईंको पापहरूबाट बचाइने छ। यो प्रार्थना केवल तपाईंको विश्वासलाई प्रभुमा व्यक्त गर्न र तपाईंलाई मुक्ति दिनुभएकोमा धन्यवाद चढाउनु हो। “प्रभु, म जान्दछु कि मैले तपाईंको विरूद्धमा पाप गरेको छु, र सजाय पाउने योग्यको छु। तर येशू ख्रीष्टले त्यो सजाय भोग्नुभयो जसको म योग्य थिए, ताकि उहाँमा विश्वास गरेर मेरो क्षमा हुन सकोस्। मुक्तिको लागि म मेरो भरोसा तपाईंमा राख्दछु। तपाईंको अचम्मको अनुग्रह र क्षमादानको निम्ति तपाईंलाई धन्यवाद! आमिन!”